Manafi - Avia fa... - Tononkira Malagasy - serasera.org
You are here: home > Tononkira > Manafi
Avia fa... (Manafi)
Tsy misy anarana afa-tsy tokana hazona fiainana Fiainan-tsambatra Ny Tompo Jeso e! (Fa Izy Izy ihany) Fa Izy nanome ary mbola hanome Fitia tena fitia Ho an'ireo nania Kanefa tsy manery Safidy anao irery Aza misalasala fa miandry anao lay vala Ny Tompo miandry ao Hanafy lamba vao Ny andraso andraso lava Hialao sao mandatsa Anio dia anio no tsara Hodinao ao am-bala
Na fotsy ianao na mavo , Na iva ianao na avo Dia samy efa nivily e! Na zovy ianao na zovy , Teo aminy mitovy Samy tiany hovonjena
Avia ry efa nania (mba) Hidera ilay nitia (ka) ento feo manga Dihizo araho lokanga hobio ilay mpamonjy e!!! Ny rany raraka (dia) Tsy mba nanavaka (fa) Ho an'izao tontolo Zay efa bobongolo Ka tiany ho afa-jaly e!
Dieny mbola akaiky Meteza ianao hanaiky Ô mijanona aloha Voahy izany fo Handray ny Tompo Fa Izy Izy ihany Fa Izy nanome ary mbola hanome Fitia tena fitia Ho an'ireo nanitononkira.serasera.orga Kanefa tsy manery Safidy anao irery Aza misalasala fa miandry anao lay vala Ny Tompo miandry ao Hanafy lamba vao Ny andraso andraso lava Hialao sao mandatsa Anio dia anio no tsara Hodinao ao am-bala
Na manana harena na tsy manan'omena Antsoiny ianao anio e!! Ny tompo te hanasa ny vita sy efa lasa Ho fotsy tena hadio e
Aza matahotra (fa) efa olon'afaka (ndeha) Ny feonao hasandrato hihira tsy hiato hideran'ilay Mpamonjy e!! Ianao mafy fo (mba) henoy iany aloha (sao) Ho tara vao hitady nefa ilay vavahady dia efa tsara hidy e!!!
Dieny mbola akaiky Meteza ianao hanaiky o mijanona aloha Voahy izany fo Handray ny Tompo
Fa Izy Izy ihany Fa Izy nanome ary mbola hanome Fitia tena fitia Ho an'ireo nania Kanefa tsy manery Safidy anao irery Aza misalasala fa miandry anao ilay vala Ny Tompo miandry ao Hanafy lamba vao Ny andraso andraso lava Hialao sao mandatsa Anio dia anio no tsara Hodinao ao am-bala
Mpihira : Manafi
Mpamaky : 458
Mpakafy : 0 Ankafizo
Nampidirin'i : havoberesaka
Tamin'ny : 15/12/2017 10:55:54
ID : 10218
Page rendered in 0.1680 seconds